Linux Foundation Inovhura Vhura Security Chengetedzo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Linux Foundation inoenderera nemapurojekiti anonakidza akasimudzirwa nekuda kwemahara uye yakavhurika sosi software. Iye zvino vaburitsa Vhura Security Controller, chirongwa chakanangana negore uye chengetedzo, ichiisa pakati pekuomesa masevhisi enzvimbo idzi akakosha nhasi. Kutenda kune Open Open Controller isu tichakwanisa kubata kuendesa kweyechokwadi network chengetedzo marongero, pamwe nebasa rekuremedza, uye kugadzirisa masevhisi egore.
Iko kusangana kwakakwana kweanodzora e Seguridad uye chirongwa chakavhurika. Masangano anobva akwanisa kubatsira muprojekti kuti irambe ichivandudza chengetedzo uye kuiendesa kune zvavanoda. Arpit Joshipura, mumwe wevatungamiriri veLinux Foundation, akataura kuti chaiwo maratidziro akagadzirwa nesoftware ari kuwedzera kudiwa uye anodikanwa mugore, uye hazvina kukosha kuti vave nechokwadi chekuchengetedza kwavo kudzivirira matambudziko. Ndosaka achiti iri chirongwa chinonakidza chinosanganisira iyo Linux Foundation, tichivimba kuti kuchave nevamwe vazhinji vanopa mune ramangwana.
Vhura Chekuchengetedza Mutyairi ane rezinesi pasi peApache 2, uye anotarisira rutsigiro rweindasitiri sezvandatotaura. Muchokwadi, Evan Xiao anobva Huawei atozivisa kare kuti vane shungu dzekushanda pamwe chete neLinux Foundation pane ino chirongwa. Ndozvakaitawo Rick Echevarria, mutevedzeri wemutungamiri weIntel wesoftware nemasevhisi. Makambani ese ari maviri akazivisa kuti achabatana neprojekti yeLF yekumhanyisa kusimudzira nekuvandudza Open Security Controler.
Pasina kupokana, nezviitiko zvekurwiswa kuri kuitika nguva pfupi yadarika, uye uko pasina system iri 100% yakachengeteka, yega yeaya mapurojekiti anobatsira kugadzirisa chengetedzo achagamuchirwa. Kunyangwe izvi zvisingaite zvakananga vashandisi vepamba, zvakanaka kuti uzive izvozvo iyo Linux Foundation haigumi mukuzvipira kwayo neakavhurika matekinoroji uye chengetedzo mune ino kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Foundation inotanga Open Open Controller
Carlos Mora akadaro
"Kururamisa masevhisi"? Iwe unorevei, unogona kuzvitsanangura zvirinani?
Pindura Carlos Mora
Tuxedo Makomputa ichagadzirawo yavo yekugovera zvichibva paXubuntu